Laakiin sidaan halkan ku baranay, waxaan idinla wadaagaynaa wararkii ugu dambeeyay ee suuqa iyo xanta suuqa dhexdiisa wargeysyada ugu waa weyn Yurub maalinta Arbacada.
Milkiilaha Chelsea Roman Abramovich ayaa doonaya inuu dib ugu soo celiyo kooxda tababaraha Yuhuuda Avram Grant si uu u caawiyo Frank Lampard. (Sky Sports)
Real Madrid ayaa qorsheyneysa inay iibiso lix ciyaaryahan xagaagan si ay lacag ugu hesho weeraryahanka reer France Kylian Mbappe, 22. Garethe Bale, Marcelo, Luka Jovic, Isco, Ceballos iyo Brahim Diaz dhamaantood waa iib. (AS)
Weeraryahanka Manchester City Sergio Augero waxaa doonaya kooxaha Barcelona iyo PSG. 32 jirka reer Argentine ayaa lagu heli karaa qaab bilaash ah markii uu heshiiskiisu dhacayo xagaagan. (Cadceed)
Daafaca Manchester United Timothy Fosu-Mensah, 23, ayaa ka tagaya kooxda kuna biiraya kooxda Bayer Leverkusen aduun dhan million 1.5 million kadib markii uu diiday inuu kordhiyo qandaraaska uu kula joogo United. (RAG)
Wolves ayaa usheegtay tababare Nuno Espirito Santo inuu lumiyo xiisaha Chelsea iyo weeraryahanada Liverpool Olivier Giroud iyo Divock Origi, maadaama aysan heysan wax lacag ah bisha Janaayo. (Mirror)
Bayern Munich ayaa ku dhow inay heshiis la gaarto daafaca kooxda Reading Omar Richards. Everton iyo West Ham ayaa sidoo kale xiiseynaya ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka England, kaasoo qandaraaskiisa uu dhacayo xagaaga soo aadan. (Mas’uulka)
Fernandinho oo 35 jir ah ayaan wali kordhin heshiiska uu kula joogo Man City iyada oo kooxo badan oo yurub iyo Latin America ah ay saf ugu jiraan saxiixiisa. (Telegraph)
Arsenal ayaa isha ku heysa garabka Shakhtar Donetsk Manor Solomon waxayna doonayaan inay dalab ka gudbiyaan 21 jirka reer Israel. (Mas’uulka)
Daafaca Napoli Kalidou Koulibaly, oo si xoogan loola xiriirinayo Liverpool, Manchester City iyo Manchester United, ayaa diyaar u ah inuu iibiyo bisha Janaayo, laakiin waa hadii ay jirto dalab 100 milyan koox ah. (TalkSport)
Daafaca dhexe ee Real Madrid Casemiro, oo 28 jir ah, ayaa noqday ciyaaryahanka ugu qaalisan kooxda reer Spain, sida laga soo xigtay KPMG. (Mundo Deportivo)
Daafaca Barcelona Junior Firpo ayaa go’aansaday inuu sii joogo Nou Camp xilli la isla dhexmarayo in 24 jirkaan uu ka tagi doono kooxda. (Magac)
Jose Mourinho ayaa weerar ku qaaday Mesut Ozil wuxuuna sheegay inuu door bidi lahaa ka fariisashada halkii uu u ciyaari lahaa Tottenham. Mourinho ayaa ku jawaabay in qofna uusan isaga dooneyn markii hore. (SOLAR)
AC Milan ayaa xiiseyneysa daafaca Chelsea Fikayo Tomori waxayna qorsheynayaan inay amaah ku qaataan inta ka harsan xilli ciyaareedkaan. (Mas’uulka)
Manchester City ayaa ka fiirsaneysa inay u dhaqaaqdo ciyaaryahanka khadka dhexe ee Sassuolo Manuel Locatelli oo 23 jir ah xagaaga soo aadan. (Daily mail)
Weeraryahanka Leicester City iyo weeraryahanka reer Algeria Islam Slimani ayaa dawo ku mari doona magaalada Lyon Arbacada. (Sky Sports)
Tottenham, Sheffield United, Rangers iyo Celtic ayaa dhamaantood doonaya 19 jirka reer Wigan ee reer Scotland Kyle Joseph. (Mirror)